DECLARATION	OF	THE OROMO	DEMOCRATIC	FRONT	(ODF)
Baga Nagaan dhuftan! Welcome! Herzlich Willkommen!
Gabaasa Hiriira Nagaa Waajjira Qonsuula Motummaa Wayyaanee magaala Frankfurt biyyaa Jarmanii, duratti geggeffame
1.Bu’uura Rakko ummata Oromoo gabrumaa fi sirna Koloneffata akkauma ta’etti furmaatni isaas Bilisummaa qofa dha, kanaafu Qabsoo Bilisummaa ummata Oromoof geggeffamu kessa hirmaanna kenya cimsine ittifuufna.
2.Lafa Oromoo lafee Oromooti, yomi iyyu kan Oromoo ta’e jiraata, kana tuffachudhaan waan Haraghee kessatti raawwatama jiru cimsine ni balaaleffanna, guma sabakenya ni baafna, lafti humna nurra fudhatame humnaan ni deebisifanna.
3.Beektotni, dargaggotnii fi abbootiin Oromoo mana hidhaa wayyaneetiin dararaman haal-duree tokko maalee akka hikaman cimsinee gaafanna.
4.Ajjeechaa suukanneessaa Calanqo fi Nannoo Oromiyaa Hunda irratti raawatamefi dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffamaa jiru cimsinee balaaleffanna!
5.Mirga Oromootiif falmuuf jecha hiidhaa reebicha fi ajjechaa mootummaa wayyanee dura dhabachuun qabso bilissumaa oromoo geggesaa jiran nuti miseensonni Tokkummaa Barratoota Oromoo Jarmani qabsoo isaanii kana galmaan ga'uudhaf tumsa barbachisu hunda ni goona.
6.Rakkina saba kenya furuuf qabsoo bifa kamiyyu geggessun mirga kenya fi dirqama lammumma kenya ta‘uusa hubachudhaan har‘aas qabsaa'oota Billisummaa Oromoo walihubanno fi waligalteen gara tokkumatti akka dhuufani fi qabsoo eegalame fixan akka baasnuu waamicha kenya kabajaan dabarsina.
7.Rakko Sabakenya fuuruudf, karaa Nagaan gqabsoofna jechaa, haala Seera fi Heera Biyyicha eeyyamuttin utu Hojii isaani Hojjechaa jiran, sobaan yakkamanii kan mana Hidha Wayyaannee kessatti guuramani Oromootaa kan akka Obbo Baqaalaa Garbaa fi Prof. Dr. Mararaa Guddiina ragaa nu bahaan tokko yo jiraate, Motummaan TPLF kana qabso kara naga godhamu kammu kann hinfeene ta’uusaati. Kanaafu kana booda mirga ummmaata kenya dhitame jiru kana kabajachisuufi abbaa biyyummaakenya deebiisuuf qabsoo hidhanoo dabalatee malee akka hintaane irra hubanne hundi kenya qabso amala motummaa kanaaf deebii qubsaa kennu danda‘u, qabso hidhanno bukkee dhadhabachun dhebbu bilisuma saba kenya akka mirkanesinu waamicha kenya dabarsiina.
8.Motummaan TPLF-Wayyaanne motummaa shororkessaa waan ta’eef, humna tokkon kaane hunden buqqiisuun nagaa ummaaticha deebiisuuf kan bobaanu ta‘uusa hojidhaan ni mirkanessina.
9.Motummaa TPLF-wayyaannee, Gargaarsaa argate hunde abbaa Irrummaa ittin jabeffatu sana laamsheessuuf, tokkuman kaane shiraa mottummaa kana akkasumas Sooba fi yakkaa raawwachaa jiru adunyaatti beksiisu irratti daran cimsine hojjenna.
10.Qabsoon Qeerroo fi Ummata Oromoo amma Oromiyaa kessa eegale jiru jajjabeessuun qeerroon biyya kessafi biyya ambaan humna tokkon ta’aani qabsaa’uu irratti waan barbaachisa ta’ee hundaan bira daabbachuu waadaakenya haaromsina.
11.Kana malees dirqama qabsoo fi yeroo nu gaafatu hunda lubbuukenya ille utu hinquusatin bahuuf qophii ta’uukenya ni mirkanessina.
Websites Links Associated with Oromia and the Oromo People